Albuudi Cilee Godina Iluu Abbaa Booraa Keessa Jiru Haalaan Saamamaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase. « QEERROO
yaalaa turan. Har’as akeekni Wayyaanee kun ittuma fufe kan jedhan jiraattoonni Yaayyoo, ” albuuda cilee irraa fayyadamaa ta’aa hinjirru. Wayyaaneen dhaabbata METEC jedhamutti gurgurattee tajaajila irraa argachuu mallu nu dhabsiifteetti. Dhaabbatni Metec jalqaba maqaa Waarashaa Xaa’oo dhaabuu jedhuun haa dhufu malee, Wayyaanee waliin walii galuun amma albuuda Cilee gurgurachuu irratti fuulleffatee jira. Uummanni Yaayyoos falmachuu qaba” jechuun dubbatu.
Albuuda Cilee ganda Aciboo jedhamu keessatti argamu kun albuudawwaan gati jabeeyyii Oromoon qabdu keessaa tokko haa turan malee uummata keenya naannichaarra qubatee jiru fayyadamaa taasisaa akka hinjirre gabaasi Sagalee Qeerroo Bilisummaa dhaqqabe ifa taasisa.
« SQ-Sagalee Qeerroo Bilisummaa Sadaasa 24 2017
Maaltu deemaa ture? Maaltu deemaa jira? Maaltu deemuuf jira? »